Huddersfield Town oo ku guulaystay inay ku soo biirto Premier League-ga - BBC News Somali
Huddersfield Town oo ku guulaystay inay ku soo biirto Premier League-ga
Image caption Kooxda Huddersfield Town oo u dabaaldegaysa guusha
Kooxda kubadda cagta Huddersfield Town ayaa ku guulaystay inay u soo baxdo ka qayb galka Premier League-ga ka dib markii ay ciyaar xiiso leh oo ka dhacday garoonka Wembley ay kaga guulaystay 4-3 rigoorayaal kooxda Reading.
Sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta loogu talo galay iyo waqtigii dheeraadka ahaa ayaa labada kooxood isku mari waayeen 0-0, iyadoo markii dambe loo gudbay gool-ku-laad.
Ciyaaryahan Christopher Schindler ayaa guusha siiyey kooxdiisa kubadii ugu dambeysay ee la laado, ka dib markii goolhaye Danny Ward uu ka qabtay kubad Jordan Obita.
Huddersfield Town ayaa ku soo laabanaysa horyaalka tan iyo sanadkii 1972-dii, waxaana Reading ay noqonaysaa sanadkii shanaad oo xiriir ah oo ay ka maqan tahay horyaalka Premier League-ga.
Huddersfield Town sanadkii hore waxay ku dhamaystay kaalinta 19-aad tartanka Championship-ka, laakiin markii loo dhiibay tababaraha Jarmalka u dhashay ee David Wagner kooxdu waxay ku talaabsatay isbadal xoog leh iyadoo la soo wareegtay 13 ciyaartoy oo cusub.
Huddersfield waxay u helaysaa abaalmarin $195 milyan oo doolar, waxaase lacagtaasi ka badan oo ah £333 milyan oo doolar helaysaa haddii ay sanadka ugu horreeya ay ka badbaado inay ka dhacdo Premier Legaue oo ay ku laabato heerka labaad.
Kooxda Huddersfield Town waxay leedahay taariikh aad u wayn oo waxay ahayd kooxdii ugu horreysay ee Ingiriis ah oo sadex mar oo isku xigta ku guulaysta horyaalka taasi oo ay sameeyeen sanadkii 1962-dii, sidoo kale sanadkii 1922-kii waxay qaadeen koobka FA Cup.
Huddersfield waxay ku biiraysaa kooxaha Newcastle United iyo Brighton oo ku guulaystay inay ku soo biiraan Premier League-ga.
Image caption Jordan Obita gool-ku-laad khasaariyey
Image caption 195 milyan oo doolar ayay guushan ka helaysaa Kooxda Huddersfield Town
Image caption Aaron Mooy oo u dabaaldegaya gool ku laadka uu dhaliyey